Izinto yokwakhiwa yonke indawo namuhla. Konke lokhu kwenziwa izingxenye yemishini kanye nezindlela, epulasitikini eziningi, Abrasives, ezinye izinhlobo zemikhiqizo upende - konke lokhu okuhlobana ngayo izinto zokwakha. Esinye isibonelo okuphawuleka Izinsimbi lezinyosi, okuyinto ekuqaleni asetshenziswe zamakhemikhali esindayo izimboni ukuthuthela ukuphakama ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwabasebenzi ezisebenza. Namuhla, uhla lokusentshenziswa yabo ezinwetshiwe. Ngakho, umphakathi waqala ukuba lisetshenziswe shipbuilding, ukwakhiwa civil nezezimboni, nokwakhiwa kwemigwaqo, amabhuloho, imigudu, overpasses, embonini uwoyela, ezolimo kanye Mills ngoba izimayini.
Nehele - eside nokuphepha
izinto wezakhiwo, okuhlanganisa kuhlanganise lezinyosi Izinsimbi, is zihlukaniswa okusezingeni eliphezulu Izakhiwo kanye mechanical kwensimbi, okukuvumela ukuba silisebenzise ezimweni lapho ukusetshenziswa ezinye izinto ukuqinisekisa ukuphepha nokwethembeka kungenzeka eside.
Nehele nge izakhiwo esiyingqayizivele, kuba okubalulekile kakhulu ukusetshenziswa kokubili endlini futhi bengaphandle. It is kahle umelana ekucindezelayo hhayi kuphela eqinile emzimbeni, kodwa futhi ukuba yangaphandle endaweni enobudlova (e uma isimo sezulu sisibi ezifana imvula, iqhwa, isichotho noma frost), naphezu kweqiniso lokuthi isakhiwo nehele ngokwawo% 20 kuphela yakhiwa metal, nakho konke okunye ikhulule isikhala sokulondoloza sekhompyutha isikhala ithatha emoyeni. Nokho, kungaba ukumelana umthwalo nombala basakaza phezu amathani afinyelela ku-700, ingasetshenziswa njengoba ukufinyelela imizila ngoba namaloli.
Izinto zokwakha. Izici Mesh decking
Umklamo flooring yeselula - isembozo futhi ilungu asekelayo kokuba simise ezahlukene. Kwakamuva ahlelwe parallel komunye nomunye, kanti enamathela ukukhonza njengephayona yokuxhuma, kanjalo zakha isimiso isakhiwo Monolithic nge isikhala emoyeni, ezahlukene amandla okusezingeni eliphezulu izici.
Ukukhiqizwa imigqa eyamukela ngezindlela ezimbili - by Welding bese ucindezela. Eyesibili indlela lamalungu ikhava kuthiwa sicindezelwe zibe esindayo ngaphansi ukucindezela amathani 500, ngalokho lunikeze amandla okusezingeni eliphezulu, ukuqina kanye Ukusebenziseka komkhiqizo. Le ndlela yokukhiqiza evumela ukusebenzisa flooring yeselula akuyona kuphela kuyadingeka ukuba kulungiswe izinkinga ezingokoqobo, kodwa futhi njengendlela element zokuhlobisa ekuklanyweni kwezakhiwo kanjalo nezinhlaka.
izakhiwo Universal mechanical izinto which they lwaduma nokuduma, futhi imigqa eyamukela ekhiqizwa yi-Welding. Ukuze wenze lokhu, sebenzisa steel omnene, okuyinto kamuva asitholayo ukucutshungulwa ezengeziwe compounds ekhethekile ukuze udlulisele izakhiwo anti-ukugqwala, elibuye kusiza ukunweba ukusebenza kwawo.
Izinto zokwakha, ezisetshenziswa ekwakheni ama-afanayo yeselula ukuvumela ukudalwa anti-ukushelela enamathela okuyinto ebaluleke kakhulu ezindaweni lapho ukusetshenziswa njalo lamafutha noma uqweqwe lukashukela kwenzeka komkhumbi nenkathi ebandayo.
Ezahlukene isicelo elinama enjalo kwesakhiwo njengoba nehele, ngenxa yokuthiya kwayo umthwalo wayenethonya kanye nokwenzeka usebenzisa ezihlukahlukene imiklamo, evumela ukusebenzisa kwayo yedivayisi isitebhisi zezimboni, izinkundla, yokumba uwoyela design, ekwakhiweni emkhakheni amandla, agcine ezikhumulweni.
Ukwakha izinto ezibusontathu 3-D iphrinta. New ubuchwepheshe amakhaya ukwakhiwa
Concealer ubuso: kanjani ukuyisebenzisa kahle?
Uchungechunge oluthi "Ranetki": nabalingisi izindima